Tonga Amin’ny Faran’ny Lalina ny Media Sosialy Amin’ilay Hetsi-panoherana Milomano 30 Km Miainga Eo Tobago Mankany Trinidad, Nokarakaraina Mpanao Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2017 13:29 GMT
Fast ferry, ny T&T Spirit, miandry ny hialàny amin'ny seranana ao Scarborough, Tobago, hankany Trinidad. Sary avy tamin'i Jenni Konrad, CC BY-NC 2.0
Nanome toky ny politisiana iray fa hilomano ny 30 km halavirana manasaraka nosy Karibeana roa ho toy ny mariky ny fanoherana. Nilaza ny mpilomano tranainy iray fa tsy hahavita izany izy. Nilaza ny Sampana Mpiaro ny Morontsiraka eo an-toerana fa tsy afaka hiantoka ny fiarovana azy, fa mbola niroboka ihany anefa izy.
Firenena iray ihany i Trinidad sy Tobago, fa misy nosy roa mifandray amin'ny tetezana an'habakabaka (fiaramanidina) ao an-toerana, ary tolotra sambo mpampiampita mampifandray ireo nosy izay sady mitatitra olona no mitatitra fiara. Vao haingana ilay sambo no niharan'ny fanadihadiam-bahoaka, taorian'ny tsy nahatanteraka ny fizotry ny fividianana sambo vaovao Ocean Flower 2
Raha tsy nahavita nanatratra in-droa ny fe-potoana nifanomezana ilay mpamatsy ny sambo, ny Bridgemans Services Group mitoetra any Kanadà, nanapaka hevitra ny hmarna ilay fifanarahana fividianana ny Manampahefanan'ny Seranan-tsambon'i Trinidad sy Tobago (PATT) mba hametrahana tolobidy hahazoana sambokely vaovao. Io dia nahatonga ny isan'ny sambo mpitatitra olona mampifandray ireo nosy roa hijanona ho roa monja — ny T&T Spirit sy ny T&T Express — ary sambo mpitatitra entana iray, ny Cabo Star — hatramin'ny nanesorana ny MV Superfast Galicia tsy hiasa ny volana Aprily 2017.
Nisy antso avy tamin'ny roa tonta, ny mpanohitra sy ny vondrona fiarahamonim-pirenena mba hisian'ny fanaraha-mason'ny polisy ary kaomisionan'ny fanadihadiana amin'io resaka io, mba hamaritana raha toa ka nangarahara.na tsia ny fizotr'ilay fividianana.
Lasa lehibe loatra ny faneren'ny vahoaka ka tsapan'ny Praiminisitra Keith Rowley ny filàna hiala tsiny “amin'ireo olom-pirenena voakasika, indrindra ireo vahoakan'i Tobago, izay mihoatra noho ny lalàm-piainana amin'izy ireo ilay tolotra”. Niantso ny PATT ihany koa izy mba hitady sambo vaovao iray “ao anatin'ny fotoana faran'izay haingana azo atao” ary nanendry mpanao fanadihadiana amin'ilay resaka manala-baraka momba ilay fividianana sambo, tsy iza fa ilay “mpandraharaha manan-traikefa sy nahomby”, Christian Mouttet.
Lasa toy ny fandrisika ho an'ny fizaràna faharoa io fanendrena io, izay lasa fantatra ao amin'ny Aterineto amin'ny hoe #FerryTales.
‘Tonga ny rano’
Watson Duke, ny filohan'ny Public Services Association (PSA) – Fikambanan'ireo Asam-Bahaka – sy ny lehiben'ny vitsy an'isa ao amin'ny Antenimieran'i Tobago (THA), nangataka haingana ny fanafoanana ny fanendrena an'i Mouttet. Na eo aza ny traikefa lehibe ananan'i Mouttet amin'ny fandraharahana, hoy i Duke, ilay toerana dia mitaky “olona mahay tsara ireo politikan'ny tolobidy natao ho an'ny daholobe ary ny fepetran'ny lalàna”; hevitra izay ifampizaràn'ny vondrona mpisolovava Fixin’ T&T.
Avy eo, tao anatin'ny ataon'ny mpisera maro amin'ny Aterineto hoe tetikady politika faran'izay henjana, nilaza i Duke fa hilomano araka ny endriny mifampitohitihy miainga avy ao Tobago ka hatrany Trinidad izy ho fanoherana ireo olana tamin'ny fividianana ary ny tolotra tsy azo antoka omen'ny sambo. Tamin'ny fotoana nanoratana azy ity, tokony ho nanaraka an'i Duke amin'ny lomanony ireo mpikambana hafa ao amin'ny filankevitra vitsy an'isa sy ireo mpanjono mipentsopentsona ao Tobago.
Ilay hetsika lehibe dia noeritreretina hatao ny 28 Aogositra 2017. Raha samy nanandrana ary nànana ambaratonganà fahatanterahana niovaova ireo atleta maro, tsy afaka hamarinina kosa hoe efa nisy nahavita ilay lomano tamin'ny halavirana 30 km ve.
Raha nahafantatra izany ireo mpisera amin'ny Aterineto, naneho fihetsika fandrabirabiana sy fanesoana ny hetsika lehibe ataon'i Duke izy ireo.
Nanontany tena i Patricia Worrell mpampiasa Facebook raha toa ka hamindra ny fomba fiasany ara-politika ety an-tany ho eny an-dranomasina i Duke:
Sata tao amin'i Facebook napetrak'i Patricia Worrell, izay milaza hoe, “Eritreritra sendra mandeha: afaka milomano i Duke, sa ve izy mieritreritra ny hivazavaza amin'ny rano mandra-panaikin'ny rano hanohana azy?”
Misaintsaina ny fandresena tamin'ny 4×400 metatry ny ekipan'ny hazakazaka mifampitohy ao Trinidad sy Tobago tany amin'ny Fifaninanana Manerantany IAAF, nananihany toy izao i Rhoda Bharath:
Sata ao amin'ny Facebook navoakan'i Rhoda Bharath, izay mivaky hoe, “Misy ireo ve sendikàn'ireo mpitarika nanjohy an'i Watson Duke amin'ny lomano mifampitohiny? Iza no hamarana io lomano io?”
Ilay mpanao gazety, Laura Dowrich-Phillips, nandefa karazan-javatra maro mahatsikaiky tao amn'ny Aterineto, mikasika ilay #TheGreatSwim (Ilay Lomano Goavana), izay tonga hatramin'ny filazana hoe manantena izy fa hanana GoPro i Duke, ka hatramin'ny fametrahany fanontaniana ny tenany raha toa izy ka manana olona mitovy aminy hirotsaka eo amin'ny toerany.
Lasa be dia be sy haingana be ireo kisarisary mananihany, toy ity indray mandeha ity avy ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Caricomedy:
Kisarisary mananihany tao amin'ny Caricomedy momba ny lomano fanoheran'i Watson Duke, izay midika toy izao: “Milomano avy any Tobago hankany Trinidad ho an'ny vahoaka i Watson Duke, kanefa ny sipanao ao Arima (any atsinanan'i Trinidad) mitaraina rehefa mitsidika anao any Diego Martin (any andrefan'i Trinidad). Watson Duke no karazana lehilahy tokony hananana.”
Fa taorian'ny nandefasan'i Duke sariny nanao akanjonà mpilomano sy aro aina mibanjina ny ranomasina no tena nampitapitapy ny media sosialy.
Ao amin'ny Twitter, nandefa “meme” (kisarisary ohatra) roa avy tamin'ny alalan'ny kaontiny Instagram i Rhoda Bharath:
Fampihomehezana nalaina tamin'ny The Justice League, miaraka amin'i Watson Duke ho toa an'i Aquaman. Meme nozarazarain'ireo mpampiasa media sosialin'i Trinidad sy Tobago be tokoa manerantany.
Meme iray hafa, tamin'ity indray mitoraka ity nalaina avy tamin'ilay horonantsary malaza be mandeha amin'ny fahitalavitra Game of Thrones, izay mivaky toy izao, “Tonga ny Rano.” Nozaraina be tao amin'ny media sosialy.
Na ny ekipa maranitra amin'ny dokambarotra ao ambadik'ilay marika labiera malaza aza tsy nahavita nanohitra ny tsy hiditra hanao zavatra momba an'io koa, tamin'ny famoahana lahatsary fohy anà labiera mibofaka manao aro aina raha hita ao aoriana kosa ilay sambo haingam-pandeha, miaraka amin'ny kisarisary misy ireto soratra ireto “Milentika na Milomano, Tonga Isika'”.
‘Mandrimandry amin'ny resaka teny, tsy mahita ny sary an'ohatra’
Raha fantatr'i Duke ny hanihany mandeha amin'ny Aterineto moba azy, hita ho toa tsy miraharaha izany izy, eo ankilany mifantoka amin'ny sakafo fiomanany amin'ny zavatra hataony izy, izay nozarainy amin'ny Facebook.
Misy mpampiasa media sosialy vitsivitsy naneho fanohanana an'i Duke, nidera ny fanapahankeviny tsy milefitra ary maneho ny firaisankinany. Patricia Worrell, nizara fanehoanhevitra avy tao amin'ny olona iray “mpanohana an'i Duke”:
Tsy tena hitan'izy ireo ny tena lomano. Tsy mikasika ny lomano loatra io. Mikasika ny olona voasazy sy mijaly ilay izy…tsy misy olona tsy nikotrana tsara tena ahavita hilomano io halavirana io kosa aloha, kanefa ny olona mifantoka loatra amin'ny teny ka tsy mahita ny zava-mitranga.
Miray hevitra amin'izany i Worrell kanefa nanamarika izao:
…Kanefa tsy ananana na zara raha ananana fitokisana ilay tompondakan-dry zareo nanendry tena…
Nanohy nilaza izy fa tsy nahita mihitsy fihetsiketsehana na fanehoana tao amin'ny Aterineto ny “fanindrahindràna na firaiketam-po nantenain'i Duke”. Duke, hoy izy, dia tsy inona fa “Pied Piper adaladala tsy misy azo raisina intsony”, raha toa ireo mpanaraka azy kosa indray “Don Quichotes amin'ilay Fiampitàna”.
Mandritra izany, tsy nipetra-potsiny ny vohikalam-baovao mpanebaka Wired868, miampanga an'i Duke ho “manisy hanihany mampalasa adala amin'ilay tantara ratsy mampieritreritra”.
Na milaza aza i Duke fa manakaiky ny lomano amim-pahatoniana izy, miaraka amin'ireo sambokely manohana azy aoriana, namoaka fanambaràna an-gazety ny Mpiandry Morontsirak'i Trinidad sy Tobago; mampitandrina amin'ilay zavatra hatao ary manala tena tsy ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra mitranga eo.
“Tsy afaka hanome fitaovana na fiantohana amin'ny karazan-javatra atao an-tsitrapo toy izao ny Mpiandry Morontsiraka amin'izay fotoana izay,” hoy ny naoty navoaka.